Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida oo maanta xukuno kala duwan Riday. August 3, 2013 |
Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida oo maanta xukuno kala duwan Riday. August 3, 2013
Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida oo maanta xukuno kala duwan Riday.
Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida ee Somalia ayaa maanta waxa ay riday xukuno kala duwan kuwaas oo ay ku kala ridy labo qof , Maxkamada yaa ugu horeyn waxa ay dil toogasho ah kuriday eedeysane Aadan Sheikh Cabsi oo lagu eedeyay inuu kamid yahay Ururka Al-shabab isla markaana uu dilay wariye Xasan Yusuf Absuge Wariyaha ayaa waxa ladilay taarikhda markii ahayd 21-o9-2012 laguna dilay Magalada Muqdisho .
Xukunkan ayaa waxa ku dhaawaqay Ganshanle sare C/laahi Keyse oo u akhriyay Saxaafada goob jooge ahayd markii xukunka lagu dhawaaqayay , Ganshanle C/lahi ayaa sheegay in Maxkamada Ciidamada qalabka sida ee xukun dil ah kuriday eedeysanahn isla markaana aan laga rabin wax mak dhow ah uuna sheegay in uu kamid ahaa Ururka Al-shabaab qeybtoda Dadka Madaxa katoogta.
Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ayaa sido kale waxa ay maanta xukun xarig ah kuriday eedeysane Jiinoow Xasan Kulmiye oo kamid ahaa ciidamada Somalia ayaa uu sheegay Kanshanle in Jiinoow laga qaaday darajada ciidanimo isla markaaana uusan dib dambe uga mid noqon karin Ciidamada Somalia , Ganshanle ayaa sido kale sheegay in lagu xukumay 8 sano xarig ah oo ah xabsi ciidanimo